Serdal: Bilaogera Arabo mpisava lalana avy ao Emirà Arabo Mitambatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2018 5:32 GMT
Mandritra ny herinandro vitsy manaraka, hanolotra ny mombamomba ireo bilaogera voatendry tamin'ny loka bilaogy Reporters Sans Frontières izahay. Anisan'ny andian-tantara ity mombamomba ity. Tsidiho azafady ny pejy fifidianana ao amin'ny RSF ary fidio ny bilaogy ankafizinao indrindra. – Ireo tonian-dahatsoratra namanao.
Iray amin'ireo bilaogera Arabo mpisava lalana i Abdullah Al-Muhairi, ary iray amin'ireo bilaogy voalohany amin'ny teny Arabo. Na izany aza, manizingizina izy fa tsy izy no bilaogera Arabo voalohany. Nilaza i Al-Muahairi, aka Serdal fa nanomboka ny bilaoginy izy satria nieritreritra fa tsy toerana tsara ho azy hamoahana ny heviny intsony ny forums ary te hanana tranonkala tokana ahafahany mametraka izay tiany holazaina izy.
Ny 12 May 2005, nankalaza ny tsingerintaona faharoan'ny bilaoginy i Serdal. Nanoratra lahatsoratra momba izany izy: “Tsy nieritreritra mihitsy aho fa hisy fiantraikany be amiko ity bilaogy ity. (…) Te-hanana sehatra manokana hanehoana ny hevitro aho.” Mihevitra i Serdal fa mety hitondra fiovàna amin'ny tontolo Arabo ny bilaogy. “Mahafinaritra izao, fa ny zava-dehibe dia ny hahatratra ny fiarahamonina elektronika mifandray.” Mihevitra aho fa eo am-piandohan'ny fananganana an'ity vondrom-piarahamonina ity isika. Amin'ny fiaraha-miasa, fifanakalozan-kevitra sy fihaonana bebe kokoa eo amin'ireo bilaogera amin'ny tontolo tena izy, hahita vokatra lehibe kokoa isika, “hoy izy nandritra ny resadresaka tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Mihevitra i Serdal fa mety ho fanamby goavana ho an'ny asa fanaovan-gazety mahazatra ny bilaogy. Hoy izy: “Maherifo kokoa ny bilaogera rehefa manoratra izay zavatra tsy sahin'ny asa fanaovan-gazety mahazatra havoaka, ary indraindray haingana kokoa izy ireo manaparitaka vaovao.” Manoratra zavatra hafa izay tsy vakiantsika matetika amin'ny gazety ihany koa ny bilaogera. ” Na izany aza, heveriny fa ny anjara andraikitry ny fanaovan-gazety dia hitoetra ho manan-danja, ary mbola ho zava-dehibe kokoa rehefa manana fifandraisana matanjaka eo amin'ny gazety sy ny bilaogy isika.
Teraka tamin'ny taona 1979, avy any Abu-Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra, i Serdal. Mamaky boky, manoratra, mandehandeha sy manangana tranonkala no fialam-boliny. Miresaka betsaka momba ny teknolojiam-baovao sy ny aterineto ny bilaoginy. Milaza izy fa maro amin'ireo asa sorany no natosiky ny fahatsapany fa manolo-tena ho an'ny mpamaky azy izy, no sady afa-po tanteraka satria mankafy manoratra azy ireo sy ny adihevitra ao amin'ny tranonkalany.